नेपालमा जातजातिको उत्पति कसरी भयो? छोटो जानकारी | मझेरी डट कम
palpali — Tue, 03/29/2011 - 22:53
गोबिन्द प्रसाद न्यौपाने (पाल्पाली ठिटो आँशु)
नेपालमा प्रचीनकाल अथवा किराँतहरूको शासन कालसम्म पनि जातीय छुवाछुत प्रथाको शुरुवात भएको थिएन । किराँतकाल भन्नाले ई. पु. ५०८ देखि ११००सम्मको अबधिलाई मानिन्छ । किराँतकालमा मुख्य पेशाको रुपमा खेती र पशुपालन रहेको र साथै केही उधोग धन्दा तथा ब्यापारको पनि विकास भएको देखिन्छ । नेपालमा उत्पदित ऊनको राडी, पाखी पाट्लिपुत्रको बजारमा समेत बिक्री भएको कुरा भारतका प्राचिन राजनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री कौटिल्यले आफ्नो अर्थशास्त्रमा उल्लेख गरेवाट पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । तर त्यतिबेला समाजमा जातपातको आधारमा कामको बाँड्फाड भैसकेको थिएन । जुत्ता तथा लुगा सिउने आरन चलाउने आदि सबै काम किराँतीहरू आफैले नै गर्थे । यो प्रथा पृथ्वी नारायणले काठमाडौं उपत्यका विजय गरिसकेपछि पनि किराँतहरूको क्षेत्रमा कायम नै थियो । पछि पृथ्वी नारायणले उनीहरूलाई लुगा तथा जुत्ता सिउने,भाडा बनाउने आदिकाम छाड्न लगाएका थिए ।
नेपालको पहाडी क्षेत्रमा किराँतहरूले राज्य गरिरहदा तराई भेगमा लिच्छबी, मल्ल, शाक्य,कोली आदिको राज्य थियो । पछि मुसलमानहरूको आक्रमणबाट ती हिन्दू राजाहरू त्यहाँ टिक्न नसकेर नेपालको पहाडी क्षेत्रमा भागेर आए । त्यसरी भागेर आएका लिच्छबिहरूले नेपालका किराँतहरूलाई हराइ आफ्नो सत्ता इ. स. ११०तिर कायम गरे । त्यतिबेला नेपालको वर्ण ब्यवस्था पनि भारतको जस्तै पेशामा आधरित कायम गरे । जातिको आधारमा खानपान रहन सहन आदिमा भिन्नता गरिएको थियो । त्यतिबेला समाजलाई चार वर्ण अठार जातमा विभाजित गरिएको थियो ।
जात अनुसार सबैले आ-आफ्नो पेशा गर्ने पर्दथ्यो । कसैले आफ्नो पेशा छोडेर अर्को पेशामा लाग्न पाइदैनथ्यो। कसैले प्रचलित जातीय मर्यादा पालन नगरेमा ऊ दण्डको भागी हुन्थ्यो । कुनै पनि जातिले आफ्नो बाहेक अर्को जातिमा बिहे गर्न पाउदैन्थ्यो । जातीय मर्यादा पालन नगरेका व्यक्तिलाई जातबाट पाटन गराइन्थ्यो । शुद्र जातिले सुन र चाँदीको गहना लगाउन पाउदैन्थ्यो । यसरी लिच्छबिहरू भरतबाट आएकाले भारतकै मनुस्मृतिका आधरित वर्ण ब्यवस्था उनीहरूले लागु गरे । र त्यतिबेला देखि नेपालमा जात जाती वा दलित जाती को उदय भायो।
सन ११९७मा अरिमल्ल नेपालको राजा भए पछि नेपालमा मल्ल काल शुरु भयो । मल्लकालमा जाति प्रथाले अँझ चरम रुप लिएको थियो । सन १२८० मल्ल राजा जयस्थिति मल्लले छिन्न-भिन्न भैसकेको नेपालको वर्ण ब्यवस्थालाई फेरि पुनगर्ठन गरेर वर्ण ब्यवस्थालाई मजबुत पारे । उनले नेपाल उपत्यकाका नेवारहरूलाई ४ वर्ण र ६४ जातमा विभजित गरे । नेवारहरू मध्ये पनि आचार्य, वैध, श्रेष्ठ र दैवज्ञलाई माथिल्लो जातमा राखियो । पोडे, चारमकार्, आदि जातिलाई पानी नचल्ने जातमा राखियो । यी सबै जातिले आ-आफ्नो जात अनुसारको काम्गर्नु पर्ने नियम बनाइयो । पोडेहरूले टोपी, जुत्ता, र सुनका गहना लगाउन नपाउने गरियो । कसाइले बाहुला भएको दौरा लगाउन नपाउने गरियो । साथै पोडे, कसाइ तथा कुलुहरूले झिंगटिले छाएको घर बनाउन नपाउने गरियो । यसरी समाजमा जातीय विभाजन संगसँगै बर्गीय विभाजन पनि गरियो । प्रत्यक बर्ग र जातिको भोजन्, बसोबास, जन्म मृत्यु विवाहमा गरिने संस्कारको ब्यवस्था बनाइयो । तल्ला जातिले माथिल्ला जातिलाई सम्मान गर्नु पर्ने भयो ।
यसको साथै कसैले आफ्नो पेशा छाडेर अर्कै पेशा अपनायो भने उसलाई अपराधीसरहको दण्डको भागी हुनु पर्ने गरियो । त्यस्ताइ गरेर माथिल्लो बर्णको स्त्रीसँग बिहा गर्न छुट दिइयो भने माथिल्लो बर्णको स्त्रीले त्यस्तो गर्न नपाइने गरियो । यदि कुनै स्त्रीले आफूभन्दा तल्लो बर्णको पुरुषसँग बिहा गर्योत र त्यसबाट बच्चा जन्म्यो भने त्यो बच्चा चाण्डल हुने र कुनै स्त्री सती जानको लागि चितामा लोग्नेसँग सुतेको बेला त्यहाँ बस्न नसकी खसी भने उनी पनि पोडे जातमा झर्न नियम बनाइयो ।
यस किसिमले जयस्थिति मल्लको समयमा नेपालमा जातीय छुवाछुत प्रथाले चरम रुप लिएको थियो । यसै प्रथालाई नक्कल गरेर गोर्खाका राजा रामशाह, सन १६०६-३३ले पनि त्यहाँको समाजलाई चार बर्ण छातीस जातमा बिभाजन गरे । उनकै सन्तान पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल उपत्यका विजय गरेपछि उनले पनि नेपाली समाजलाई हिन्दू बर्ण व्यवस्थामा नै ढाल्ने कम गरे र छुवा छुत, जात जाती प्रथालाई झन आफ्नो मन परेको मान्छेलाई माथिल्लो जातमा उकाल्ने र मन नपरेको मान्छेलाई तल्लो जातमा खासल्ने काम गरे । यसको साथै उनले जातीय छुवाछुत प्रथा नवएको किराँत समुदयमा समेत जाभार्जस्ती जातिया छुवाछुत प्रथा भित्रायउने कोशीस गरेका थिए । तर यो छुवाछुत प्रथा किराँती समुदायमा आशफल भएको देखिन्छ । यसरी पृथ्वी नारायण शाहले जातीय प्रथालाई अँझ मजबुत पारे ।
गोबिन्द प्रसाद न्यौपाने
जल्पा ५ पाल्पा नेपाल
हाल के.एस.ए. बाल्वाटार
मानवीयता र शान्तियात्रा
एउटा सानो कथाले करोडपति हुने समरसेट मम
प्रीत टाढियो यो प्रवासले